You are here: Home somal TARTANKII CIYAARAHA GOBOLLADA SOMALILAND OO BURBURAY IYO CIYAARTOYGA AFAR GOBOL OO HARGEYSA LOOGU HAYSTO KHARASHAADKII JIIFKA IYO CUNTADDA
Tartanka ciyaaraha Gobolladda ee dalka waxa iskugu soo hadhay wareegiisa labaad siddeed gobol oo kala ah Xaysimo, Sool, Sanaag Iyo Daad Madheed oo ka soo baxay tartankii lagu qabtay Magaaladda Burco. Halka tartankii lagu qabtay Booramena ay ku soo gudbeen xulalka Awdal, Hawd, Saaxil iyo Gabiley. Waxa qorshuhu ahaa in labaatan maalmood ka hor tartanka siddeed dhammaadka gobolladu ka furmo garoonka Hargeysa Stadium, hase yeeshee khilaafaadka xisbiga KULMIYE dhexdiisa iyo dhaqaalihii lagu qaban lahaa tartanka oo aanay madaxtooyaddu sii daynin ayaa sababay in dib u dhac ku yimaado tartankaasi.
Dooda Masuuliyiinta wasaaradda Ciyaaraha
Sarkaal ka tirsan wasaaradda Ciyaaraha oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyay ayaa shabakadda Gudgudenews, u sheegay in wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin qabashadda wareegii labaad ee tartanka ciyaaraha, hase yeeshee uu ka suurtoobi waayay dhinaca xukuumadda oo uu ku dooday inay kala fadhiisteen kharashkii lagu qaban lahaa ciyaaraha.
Masuulkaasi waxa uu sheegay in madaxtooyadda iyo dawladda sare aanay wax xiiso ah u haynin dhammaystirka ciyaaraha gobollada, balse ay ku mashquulsan yihiin khilaafka xisbiga KULMIYE. Waxaanu tilmaamay in cago-jiidka ciyaaraha ee xukuumaddu uu ahaa mid ka mid ah qoddobadii soo dhaliyay in Wasiirkii hore ee ciyaaruhu uu shaqadda uga tagay.
Daranyadda Ciyaartoyga Gobollada ka Yimid
Waxa jira in ay magaaladda Hargeysa rafaadsan yihiin xulalka ciyaartoyga afar gobol oo ka yimid barriga Somaliland oo kala ah Xaysimo, Sool, Sanaag Iyo Daad-madheedh,kuwaasi oo wali sugaya in la siiyo sahay ay dib ugu noqdaan gobolladoodii. Warku waxa uu intaas ku daray in kharashkii jiifka iyo cuntada muddo labaatameeye maalmood ah oo ay joogeen lagu leeyahay ciyaartoygaasi. Iyadoo wasaaradda ciyaaruhu ay bixisay qeyb ka mid ah kharashkii ku baxay xulalka afartaas gobol, hase ahaatee wali qeybo lagu leeyahay.
Maxaa Go’aan Loo Soo Saari Waayay
Xukuumadda Somaliland wax go’aan ah kamay soo saarin dib u dhaca ku yimid tartankii ciyaaraha gobolladda, mana jiro wax qaraar ah oo ay xataa dib ugu dhigtay, waxaanay taasi sumcad xumo ku tahay milgihii dawladnimadda in tartan la qabto haddana isaga oo aan dhammaanin la joojiyo. Sidoo kale, waxa isna aan la bilaabin-ba tartankii kubadda kollayga ee ciyaaraha gobollada oo isna lagu waday inuu ka furmo Hargeysa.